【Isicelo】Ilayisi Amaphrotheni kuyinto amaprotheni imifino Behlukene 100% non-GMO lonke okusanhlamvu irayisi, is the powdery ikhemikhali ezakhiwe ukucutshungulwa pulverization, purfication futhi yomile. Ilayisi Amaphrotheni Powder, acid acid yayo Ukwakheka iseduze kakhulu amaphethini UBANI, okuyinto kalula digestible
Ilayisi Amaphrotheni ungoyedwa amaprotheni okusanhlamvu okuyinto engadingi ukwenza ukuhlola of allergen. Non-allergen, Kalula digestibility, Ngokuphelele amaprotheni yemvelo phakathi kwazo zonke okusanhlamvu cereal, kahle ukulinganisela iphrofayela acid acid, okungenayo iphrotheyni kakolweni kanye lactose-free, ukubaluleka High begazi. Ilayisi Amaphrotheni uhlobo enhle amaprotheni isitshalo.
【CAS Cha】: 94350-05-7
【HS Ikhodi】: 35040090
Ulwazi Deep ku Ilayisi Amaphrotheni emakethe lisenze sikwazi bathole nawe amanani abiza izinga okusezingeni eliphezulu izimpahla. Uma ufuna Ilayisi Amaphrotheni, akukho anqikaze ukuthumela i-imeyili nathi.
Who is Ilayisi Amaphrotheni Concentrate Suitable for?
Ukucaciswa ithebula Ilayisi Amaphrotheni
ukubukeka Powder of eyethile ophuzi, unifority andrelex, akukho agglomeration noma isikhutha, akukho izindaba benezinto nqunu iso
okuqukethwe Amaphrotheni (%, ngesisekelo ezomile) N * 6,25 ≥80
lomswakama (%) ≤8.0
okuqukethwe Ash (%, ngesisekelo ezomile) ≤5.0
okuqukethwe Amafutha (%, ngesisekelo ezomile) ≤8.0
Ukuhola (ppm) ≤0.4
Ubude ipuleti ukubala (CFU / g) ≤5000
Isikhunta nemvubelo (CFU / g) ≤25
igciwane Pathogenic (CFU / 25g) Negative
Previous: 100% Organic Ilayisi Amaphrotheni
Okulandelayo: Ilayisi Amaphrotheni 85%
Bio isibilile Ilayisi Amaphrotheni
Brown Ilayisi Amaphrotheni
Brown Ilayisi Amaphrotheni Powder
Brown Ilayisi Amaphrotheni Powder 25kg
Ukudla Ibanga Raw Ilayisi Amaphrotheni Powder
Hydrolyzed Ilayisi Amaphrotheni
Yemvelo Brown Ilayisi Amaphrotheni
Yemvelo Hydrolyzed Ilayisi Amaphrotheni
Yemvelo Organic Brown Ilayisi Amaphrotheni
Organic Ilayisi Amaphrotheni
Organic lihluma Brown Ilayisi Amaphrotheni
Pure Brown Ilayisi Amaphrotheni
Ilayisi Enzymolysis Powder
Ilayisi Amaphrotheni 80%
Ilayisi Amaphrotheni Umthumeli
Ilayisi Amaphrotheni Manufactuer
Ilayisi Amaphrotheni Powder
Ilayisi Amaphrotheni Powder 25kg
Ngomala Ilayisi Amaphrotheni
100% Organic Ilayisi Amaphrotheni
Ilayisi Amaphrotheni 85%
Ilayisi Amaphrotheni 90%